मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिफरक मत
भिजिट भिसामा विदेश घुम्न चाहनेलाई नेपाल सरकारले एसएलसी पासको योग्यता र अङ्ग्र्रेजी भाषाको सर्त लगाउने कुरो कन्टिर–बाबूको कानमा परेको छ । यो कुरो सत्य हो भने कन्टिर–बाबूको यसमा फरक मत छ । सरकारको नियत ठीक छैन ।
यो सर्तको औचित्य के हो ? सरकारले नागरिकलाई थाहा दिनुपर्छ । कन्टिर–बाबूको ठहर छ– यो त घुमाउरो पाराले सर्वसाधारणलाई विदेश जानबाट रोक्न बन्देज लगाइएको हो । आखिर सरकारले २१औँ शताव्दीमा यस्तो बन्देज लगाएर के प्राप्त गर्न खोजेको हो ?
कन्टिर–बाबूले बुझेका छैनन् ।